Vampire Makoronike, inozivikanwa saga Rice saga. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Fantasy, Type, Literature, Novela, Zvinotyisa
Iyo Vampire Diaries.
Iyo Vampire Diaries inyaya yakakurumbira yemabhuku nemunyori weAmerica Anne Rice. Iyo yakanyorwa mukati mechitendero, gothic uye inotyisa mabhuku, sezvo ichiongorora mune yekiyi kiyi ngano yevampire ine nyota yeropa, ruchiva nerufu. Iyi saga yakave neakakosha mutsika maitiro pasirese. Kubva pakavambwa chikamu chayo chekutanga, Kubvunzana nevampireMuna 1976, anopfuura mamirioni zana emakopi akatengeswa pakati pemavhoriyamu ese anoumba iwo akateedzana.
Mamwe emazita e Iyo Vampire Diaries vaendeswa kumamovie uye brodway. Iyo inonyanya kufarirwa adaptation ndeye Hollywood chimiro firimu Kubvunzana nevampire (1994), zvichibva pabhuku risingazivikanwe. Yaitungamirwa naNeil Jordan uye nyeredzi Tom Cruise, Brad Pitt naAntonio Banderas.
2 Iyo husiku yezvinhu zveVampire Diaries
2.1 Hunhu uye mabhuku esaga
3 Kubudirira kwechirongwa uye manyorerwo maitiro
3.1 Kutanga munhu rondedzero
3.2 Anopokana protagonist
3.3 Chaizvoizvo mavampires
5 Vampire Makoronike, a pamberi uye mushure mevampire novels
Anne Rice munyori weAmerica akaberekerwa muNew Orleans muna Gumiguru 4, 1941. Kuwedzera kune Iyo Vampire Diaries akanyora zvimwe zvakateedzana zvemabhuku senge Varoyi veMayfair, Ngirozi Makoronike y Ramses akatukwa, ese ane madimikira anoshamisa. Vamwe veava vanogovana mavara navo Iyo Vampire Diaries.
Iyo nzira kubva kuChristu, kuenda kusatenda Mwari uye kudzokera kuchiKristu muhupenyu hwake hwese, yakaratidza zvakanyanya mabasa aAnn Rice. Iwo mazita akabudirira kwazvo maererano nekutengesa uye tsika nemagariro zvakanyorwa zvakanyanya panguva yemunyori wekuti Mwari haako.
Yakawana mukurumbira wepasirese kubva kuma1970 nema1980, paakaburitswa Kubvunzana nevampire, Kunonoka vampire y Mambokadzi weVakatukwa (iyo yekupedzisira, zvinosuruvarisa, yakanga isina kunyatsoenderana neinema), Kutanga kununurwa kwe Iyo Vampire Diaries. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kukanganisa kwemabhuku aya pane vanyori vatsva kwaive kwakakura; muchokwadi, zvinogona kusimbiswa izvozvo Twilight, uye mamwe ese mabhuku eaya masitayera ayo nhasi anozadza masherufu ezvitoro zvemabhuku nenyaya dzevampires vane basa reRice sekureva.
Iyo husiku yezvinhu zveVampire Diaries
Iyi saga inosvitsa muverengi kune vampire avo vanga vari pakati pevanhu kwezviuru zvemakore. Nhoroondo yezvinhu izvi inotaurwa munzvimbo chaidzo nemaguta, kunyanya muEurope neNorth America. Kunyangwe ivo vasingagovane kusada gariki, zvipiyaniso, uye zvinhu zvesirivheri zvine mavampires ekutanga mumabhuku, kusafa kwavo kuri kutyisidzirwa nehusiku nemoto, saka ngano dzinoitika zvakanyanya husiku.
Bhuku rekutanga mune akateedzana Kubvunzana nevampire inotanga muguta reSan Francisco muzana ramakumi maviri. Louis anorondedzera hupenyu hwake sevampire mubvunzurudzo yakavanzika nemumwe murume wemuno anonzi Daniel. Nyaya yake inoitika pakati pezana nesere negumi nemapfumbamwe emakore, kubva "pakuberekwa" kwake husiku mumapurazi eLouisiana naLestat. Mamiriro akaitwa nemunyori akakodzera kurumbidzwa, sezvo ichinyatsobata nzvimbo, mwenje nemimvuri, hwema, mavara uye zvimiro; mashandiro ayo anotsanangudza akanaka zvekuti anokwanisa kubata nekunyudza vaverengi muchirongwa.
Anne Rice nebhuku raPrince Lestat - mufananidzo naPhillip Faraone.
Hukama hwakadzvinyirirwa pakati paLouis naLestat, uye kusawirirana kwavo nezve izvo zvinogamuchirwa kuita sevampires, zvinowedzera saga yakawanda. Mamiriro ekunze enganonyorwa anowanzo kuve husiku uye yemitambo. Muverengi anofambidzana nevanyori parwendo rwavo kuburikidza nemazana emakore, kuenda kumitambo yekutangisa, mapato, zviitiko zvechisimba uye kusangana kwakashata mumakona akasviba emaguta makuru eUnited States neEurope.
Hunhu uye mabhuku esaga
Louis naLestat vabatanidzwa naArmand, Akasha, Marius, David Talbot, Merrick Mayfair, Claudia, pakati pevamwe sevanhu. inowanzoitika mune akateedzana. Iyo Vampire Diaries Inosanganisira gumi nematatu mavhoriyamu:
Kubvunzana nevampire (1976)
Kunze vampire (1985)
Mambokadzi weVakatukwa (1988)
Mbavha yemuviri (1992)
Memnoch dhiyabhorosi (1995)
Armand vampire (1998)
Ropa negoridhe (2001)
Nzvimbo tsvene (2002)
Kuimba kweropa (2003)
Muchinda lestat ((2014)
Muchinda Lestat nehumambo hweAtlantis (2016)
Nharaunda yeropa (2018)
Kutanga munhu rondedzero
Nhoroondo uye tsananguro yemampires inotanga nehurukuro iyo Daniel, muongorori wechidiki weSan Francisco, yaanoita naLouis de Pointe du Lac, ane 200-gore vampire yekuLouisiana. Louis, semunhu, anotambura nhevedzano yekurasikirwa uye nharo dzemhuri, anowira mukushushikana kwakadzika uye anonyengerwa naLestat, uyo anomushandura kuva vampire senzira yekufa.
Kubva ipapo zvichienda pakuchinjika kwaLouis kune mararamiro uye chikafu chezvinhu zvehusiku zvinorondedzerwa, pasi pekudzidziswa naLestat. Kubudikidza nemazwi aLouis, muverengi anopinda murima uye rakanyanya erotic nyika yemampires. Ichi chishandiso chekurondedzera muizwi reva protagonists chinoshandiswa mune mamwe mabhuku akateedzana.
Lestat de Lioncourt ndiye protagonist we Iyo Vampire Diaries, sezvo hunhu hwake huchiita basa rakakosha pakuronga kwemabhuku mazhinji. Nhoroondo yemhuri yavo inotaurwa muvhoriyamu yechipiri yezviteedzano, Kunze vampire, kunyangwe hazvo kwekutanga zvinhu zvakakosha zvehunhu zvichitsanangurwa
Quote naAnne Rice - akifrases.com.
Lestat haanzwisisike, anoyevedza, ane utsinye uye panguva imwechete inofadza, yakakosha hunhu hwemazuva ano antihero. Kubudikidza nehukama hwake naLouis, Armand nevamwe vatambi mune akateedzana, muverengi anoziva kuti anonyengetedza uye anonyengera, izvo zvinoita kuti ave nengozi pamwero wevanhu, pane kuita chikara chisiri chaicho. Lestat, nhoroondo yake nezviito zvake, ndizvo zvezvinhu zvikuru zvinokwezva vaverengi vesaga.
Iwo maampire esaga anozivikanwa nekuve akadzika munhu, nekuti vane rusununguko rwekusarudza uye ivo vanokwanisa kusangana nechishuwo, mhosva, kusungirirwa kwepamoyo, uye akasiyana manzwiro.
Ivo vane hutsinye uye venyama zvisikwa, dzimwe nguva vanotambudzwa nehupenyu hwavo. Ivo vanotsanangurwa zvakanyanya mune ese maviri maitiro epfungwa uye runako rwavo rwemuviri, izvo zvinoita kuti kuverenga kuve muropa. Pano zvakafanira kupa hunhu kuMupunga zvakare, nekuti padanho reruzivo raanopa rondedzero yemuviri wevatsigiri nehunhu hwavo zvinotendera kuti vadzokerezve chaiwo manhamba ekuti ivo vakanyatsofungidzirwa sei mupfungwa yemuverengi.
Nyaya dzakabatana uye madingindira akadzika
Kubva pane nzendo dzaLouis neLestat zvirongwa zvakasiyana zvakagadzirwa zvinotora muverengi kune kwaakabva mavampire, mu egypt yekare. Nhau dzevamwe vampire vakaita saArmand, varoyi vakaita saMerrick uye vanhu vakaita saDavid Talbot vanotaurwazve, zvese zvakabatana uye zvakanyatsobatanidzwa naRice.
Kubudikidza neaya mavara, iwo mabhuku anobata pamisoro senge kufa, musiyano uripo pakati pekusatenda kuti kuna Mwari nechiKristupamwe nekuzvipa mhosva, kusafa, ruchiva, uye hutsinye.
Lestat de Lioncourt ndiye protagonist mukuru wesaga uye kuburikidza nemeso ake isu tinoziva zvakawanda nhoroondo yenyaya. Iye anorondedzerwa semurume mutsvuku ane kupenya kunotarisa uye runako rukuru. Iye anokudzwa wechiFrench uye akashandira nyika yemunhu semutambi uye nyeredzi yedombo kwemazana emakore. Hunhu hunonakidza, hunogombedzera, uye vanozvitutumadza, uye kuda kuziva nezve hupenyu hwevanhu. Nyaya yake ndeimwe yeinonakidza uye inonakidza yaAnn Rice.
Louis de Pointe du Lac inomiririra kutambudzwa kwevampire iyo isingade kuve. Aive neminda muLouisiana muzana ramakore gumi nemasere. Mushure mekufa kwemukoma wake anonzwa mhosva uye anoshuva kuzviuraya, asi anoshandurwa kuita vampire naLestat. Iye anogara achipesana naLestat uye iye pachezvake pamusoro pechinhu chisingadzoreki chekudya paropa remunhu. Iye akakosha hunhu muchirongwa, uye mumwe wevaverengi vaanofarira.
Iye akanaka uye akachena-anotaridzika murume wechidiki weEuropean, anomiririra runako rwevampire. Ndiye nyanzvi yehunyanzvi. Ane chitarisiko chevane makore gumi nemanomwe ekuberekwa, zera raakashandurwa kuita vampire naMarius. Hunhu uyu hunogona kuve nyore kusangana neakakurumbira Dorian Grey, kubva Mufananidzo waDorian Grey, Oscar Wilde, zvese zvehunhu hwake, uye nehunhu hwake pakutanga kwechirongwa.
Munyori Anne Rice.
Iye munhu, Wepamusoro weChirongwa cheTalamasca, yakavanzika nzanga yakatsaurirwa kune ruzivo rwekare tsika uye zvemweya zvinhu.. Batsira Louis kuti utaure nemweya waClaudia, musikana wevampire akatendeuka naLestat. Ane hukama hwekudanana naMerrick Mayfair.
Iye muroyi kubva kuNew Orleans, akabva kune varoyi vekare. Ane masimba anomubatsira kubata nzvimbo yevakafa. Iye zvakare anokwanisa kubata vese vanhu uye mavampire. Iye hunhu hunoshamisa uye husinganzwisisike, imwe yeanodiwa, pasina mubvunzo, yevaverengi veiyo Rice nyika.
Iyo Vampire Diaries, pamberi nepashure mumano vampire
Iyo Vampire Diaries yakapa chirevo chitsva kumampires mune zvinyorwa uye tsika dzakakurumbira. Iyo ndeimwe yemasaga akakosha ezvinyorwa zvemazuva ano zveGothic. Uku ndiko kwakakonzera, kuti mumakumi emakore mushure mekuonekwa uye kukura kwayo, takaona kumisikidzwa kwemamwe masaga mumafirimu, zvinyorwa uye terevhizheni iyo yakasvika kumampires kubva kwakasiyana maonero, kuyedza kuvaita vanhu uye padhuze nevanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Iyo Vampire Diaries
Chirevo chakazara kwazvo asi chakafukidzwa nekuti mabhuku ari mumusoro wemufananidzo anoenderana nemamwe "vampire chronicles" ...
Claudia, iwo mabhuku anoenderana neyevampiric nhoroondo iyo iri kutaurwa nezvayo, chete ivo vane akasiyana mabutiro, ndinofungidzira zvichienderana nemuparidzi akaburitsa. Parizvino ndiri kuverenga zvekare Mambokadzi weVakatukwa mune 2004 mapepa, uye haina chekuita neicho. asi ndinoziva kuti makore mashoma apfuura vakaitengesa.
Orlando Juarez Alfonseca akadaro
Kubva zvandakaverenga "Kubvunzurudza naVampire" pakati pemakore makumi masere zvakandibata uye ndakaenderera mberi nesaga yezvinyorwa zvevampire, uye ndinofunga kuti hakuna mumwe munyori ane nzira yakadai yekutsanangura vese vatambi uye nzvimbo dzavanoitisa zviitiko kubva mumabhuku.
Ndinomuda uye ndinotarisira kuramba ndichizadza raibhurari yangu nemazita ake.
Pindura kuna Orlando Juárez Alfonseca
Kubvunzana naInés Plana, anofumura nyowani nyowani yekuSpanish yekuparwa kwemhosva.
Mhandara Mwenga, naWilliam Goldman